Body | Posted on Nov 6, 2019 by Ja Seng Pan
သဘာဝအတိုင်း လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရင်သားတစ်စုံအတွက် Viva
ခွဲစိတ်ပြုပြင်စရာမလို၊ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်စရာမလိုပဲ သဘာဝအတိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးမယ့် Viva
ရင်သားအတွက် စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေပါသလား။ ဘာဝတ်ဝတ် လှပမှုမရှိဘူးလား။ သေးနေလား၊ ပြားနေလား၊တွဲကျနေလား၊ မညီညာဘူးလား။ မှန်ရှေ့မှာ ကြည့်လိုက်တိုင်း ယုံကြည်မှုအပြည့်ရရှိစေမယ့် ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ထုတ်ကုန်များ
ဝတ်ရလွယ်ကူကာ သက်တော့သက်သာရှိသော Cup! ပုံကျကာ လုံးဝန်းပြည့်ဖြိုးတင်းရင်းစေပြီး လှပသော ရင်သားတစ်စုံကို ဖန်တီးပေးနိုင်မည့် Apple Upကို စိတ်ချရသော ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည့် ကလေးနို့ဘူးများတွင် အသုံးပြုသော အဆင့်မြင့် ဆီလီကွန် ကုန်ကြမ်းကို အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆပ်ပြာအပျော့စားကို သုံးကာ လက်ဖြင့် ညင်သာစွာ လျှော်ဖွတ်၍လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီများဟာ အသက် ၃၀ကျော်လာတဲ့ အခါ ဟော်မုန်းဓာတ်များပြောင်းလဲပြီး အလှအပများလည်း လျော့နည်းလာပါတယ်။သင့်တင်မျှတသော စားသောက်နေထိုင်မှုကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရန် သင့်အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား? ယခုပဲ ဗီဗာဘဲလန့်အပ်(ပ်)ကို သောက်သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ သလဲသီးဖြင့် အဓိကထုတ်လုပ်ထားသော ဖြည့်စွက်စာဖြစ်တဲ့အတွက် ရင်သားအတွက်သာမက အမျိုးသမီးများရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာလိုအပ်ချက် အားလုံးကိုပါ ဖြည့်စွက်ပေးပါတယ်။
Viva Cream Up 2
အမျိုးသမီးထု၏ ထောက်ခံချက်အမြင့်မားဆုံး ၊ ရင်သားကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလှပစေတဲ့ ပရီမီယမ်ထုတ်ကုန်အဖြစ် လေးနှစ်ဆက်တိုက် ဆုတံဆိပ်ရရှိထားသော ဗီဗာခရင်(မ်)၊ သဘာဝအတိုင်း လိမ်းကာ နှိပ်နယ်ရုံဖြင့် ကြွက်သားများကို တင်းရင်းလှပစေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်ကာ ဗော်လျူဖီလင်း (Volufiline) အထူးပြုပါဝင်သဖြင့် ဆဲလ်သေများကို ပြောင်းလဲကာ ဆဲလ်သစ်တိုးပွားအောင် ကူညီပေးပြီး စိတ်တိုင်းကျသော ပုံအထိ ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဗီဗာခရင်(မ်) Up 2ဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။